BELG TERVUREN DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Belg Tervuren Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Riot the Belgian Tervuren oo lagu sawiray 13 bilood jir wuxuu gaaray 'Koobkii Canadian' sidaa darteed magaciisa rasmiga ah ee cusub waa: Can Ch. Rabshadaha Xagaaga ee Ravenmasque CGN TT RNCL. Wuxuu ku guuleystay cinwaankiisa Imtixaanka Dabeecadda (TT), iyo sidoo kale cinwaankiisa 'Canine Good Neighbor' (CGN) iyo cinwaankiisa 'CARO Rally Obedience Novice' oo wata 'Cum Lade' (dhibcaha labaad ee ugu sarreeya) (RNCL). Sawirkan waxaa si toos ah loo qaaday ka dib mid ka mid ah muuqaalkiisa CKC oo muujinaya. Wuxuu ku qaatay guriga markii ugu horreysay kooxdiisii ​​da 'yar iyo eeygii ugu fiicnaa ee ugu wanaagsanaa.
Liiska eeyaha Beljirka ah ee Tervueren Mix
Adhijirka reer Belguim Tervuren
Beljamka Tervuren wuxuu jidhkiisa u leeyahay muuqaal laba jibbaaran. Markaad ka eegto dhinaca, dusha sare ee muuska afkiisa dhexdhexaadka ah ayaa si siman u barbar socda dusha sare ee dhakadiisa. Joogsigu waa dhexdhexaad. Dibnaha madow way dhagan yihiin. Indhaha dhexdhexaadka ah, yicibta u eg waxay u eg yihiin bunni madow. Dhegaha kacsan waa qaab saddex geesood leh oo dhererkoodu u eg yahay balacdooda. Laabta ayaa qoto dheer gaadhaysa xusullada. Lugaha ayaa toosan, is barbar socda oo toosan dhulka. Khadka sare waa heer, oo waxoogaa u janjeera dhinaca engegga. Waxaa inta badan laga saaraa soo deynta (Dewclaws). Cagaha ayaa qaab bisad u eg. Ilkaha waxay ku kulmaan maqas ama qaniinyo heer ah. Dabada ayaa ku xoog badan salka iyada oo lafuhu gaarayaan hock-ka. Koodhka laba-geesoodka ahi waa mid u adkaysta cimilada leh timo waardiye oo dhaadheer, badan, aadna isugu dhow. Guud ahaan dhererka jaakad adag ayaa ah mid dhexdhexaad ah iyo mid dheer timaha madaxa, lugaha iyo dusha sare ee dhegaha oo gaagaaban. Koodhka hoose waa cufan yahay jaakaduna waa toosan tahay talooyin madow. Ragga waxay leeyihiin tin timo qoorta agteeda oo aan caan ku ahayn dheddigga. Waxaa jira timo dheereeya oo lugaha gadaashiisa iyo lugaha hore leh timo badan oo dabada ah. Midabada koofiyada waxaa ka mid ah fawn hodan ku ah russet mahogany, ama midabbada cawl oo leh talooyin madow. Laabta, suulasha iyo garka ayaa laga yaabaa inay xoogaa cadaan yihiin. Koodhku badanaa wuu madoobaa marka eygu sii weynaado.
The Belgian Tervuren waa mid ka mid ah afarta adhi ee reer Belgium. Ey aad u dhalaalaya oo adeeca, waa la go'aamiyaa oo waa la ilaaliyaa iyadoo leh ilaalin xoog leh iyo dareen dhuleed. Bulsho sifiican si looga hortago inay noqoto mid xishood badan ama xasaasi ah. Beljamka Tervurens waxay ubaahantahay sayid khibrad leh oo adag, laakiin aan gacan culus lahayn. Haddii aad qallafsan tahay ama xad dhaaf tahay waxay noqoneysaa mid aan lala shaqeyn karin. Milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay muujiyaan kalsooni, maamulka dabiiciga ah eyga dushiisa. Shuruucda iswaafaqsan waa in la dejiyaa oo la caddeeyaa. Noocani waa mid si dabiici ah u ilaalinaya sidaa darteed waa in si wanaagsan loo tababaro oo la dhexgalo bulshada laga bilaabo da'da hore. Eydu waa inay dhexgalaan bulshada laga bilaabo dhalashada. Kufiican shaqada iyo adeecida tartanka, eeyahaani waxay sameyaan boliis heer sare ah iyo eeyaha ilaaliya . Shaqada noocan ahi hadda waa shaqadooda ugu weyn. Si kastaba ha noqotee, waxay sameeyaan xayawaan aad u fiican haddii ay leeyihiin milkiileyaal caqabad ku noqon kara maskaxdooda hawo hoggaamineed. Weligood waa feejignaan, feejignaan iyo daacad. Tervuren-ka Beljimka ah wuu ku fiican yahay carruurta haddii uu si wanaagsan ula dhaqmo. Noocani wuxuu u baahan yahay inuu ka mid noqdo qoyska oo aan lagu xirin aqal. Waxay u baahan yihiin hoggaamin, jimicsi maalinle ah oo ay weheliso tababar iyo wehel, waayo la'aanteed waa laga yaabaa inay noqdaan noqo mid wax dumiya oo ay adag tahay in la maareeyo. Beljamka Tervuren waa tamar sare, oo leh awood maskaxeed oo sare, waana deg deg fahmidiisa. Waxay u baahan yihiin shaqo ay qabtaan, gaar ahaan haddii aad la macaamilayso khadadka shaqada. Ka taxaddar marka aad soo bandhigayso eeygan xayawaanka yaryar ee aan xayawaanka ahayn . Waxay noqon karaan kuwo ku xoog badan eeyaha kale waxayna u baahan yihiin milkiile la xiriiri kara eeyga in xukunku yahay dhaqan aan loo baahnayn. Waa haddii ay si sax ah ula dhexgalaan bisadaha iyo xayawaannada kale, waa inaysan soo bandhigin wax dhibaato ah. Belgian Tervurens ayaa laga yaabaa inay si dabiici ah u soo bandhigto dhaqashada xoolaha sida cayrsashada iyo wareegga, dhaqaaq la’aanta saacado badan iyo ka-cararidda cidhibta dadka. Waa in la baraa inaysan dadka sidan ku sameyn. Tani waa eey aad u baahan. Waxay ubaahantahay milkiil khibrad leh waayo way sahlanaan kartaa in la xakameeyo ilaa milkiiluhu uusan garaneyn sida loola macaamilo mooyee. Qaabka mulkiiluhu u maareeyo eeyga wuxuu soo saari karaa kala duwanaansho ballaaran oo ku saabsan dabeecadda iyo gardaro . La hadal qof khibrad u leh nooca ka hor intaadan iibsan eeygaaga. Eeyadan badanaa wax cajaa'ib leh kuma dhisaan iibsashadaada kaliya diiwaannada waxqabadka iyo muuqaalka. Kaliya aqbal eeyga noocan ah haddii aad si buuxda u fahanto waxa loola jeedo inuu yahay alfa .
do dog dhadig ha is fahmaan
isku darka doberman pinchencher jarmal adhijir
Noocan adag ee caafimaadka leh ma laha welwel caafimaad oo weyn. Qaar ka mid ah walaacyada yar-yar ee la arkay waa suuxdin, xasaasiyadda maqaarka, dhibaatooyinka indhaha, xishood xad dhaaf ah, gardarro xad-dhaaf ah iyo mararka qaarkood sinta dysplasia iyo xusulka dysplasia. Ha ka badin noocyadan, maxaa yeelay waxay leedahay u janjeera inay noqoto cayil iyo caajis.
Tervuren-ka Beljamka ah caadi kuma sameyn doono guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Waa mid dhex dhexaad firfircoon ka shaqeeya oo waxa ugu fiican ku samayn doonta ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah. Noocani wuxuu doorbidaa cimilo qabow, laakiin wuxuu si fiican ula qabsadaa kuwa kale. Waxay ku noolaan kartaa banaanka laakiin waxay doorbidi laheyd inay la jirto dadkiisa.
digaag iyo jiir terrier
Beljamka Tervuren wuxuu leeyahay jaakad dheer oo dherer, toosan, dherer dhexdhexaad ah iyo jaakad cufan oo u baahan shanlo maalinle iyo cadayasho. Ka soo dheji gogosha qaabeysa, gaar ahaan ruffanka iyo lugaha, timahana ka soo laalaadi suulasha dhexdooda iyo dhegaha dibadda. Noocani waa iftiin joogto ah, oo labku si xoog ah u daadinayo sanadkiiba hal marna dheddigga laba jeer sanadkii. Koodhku wuxuu u baahan yahay cadayasho fiican oo fiican hal mar ama laba jeer toddobaadkii.
The Belgian Tervuren waxaa loogu magac daray tuulada Beljamka ee Tervuren. Waa mid ka mid ah afarta nooc ee adhiga Beljamka, Beljamka Tervuren, Biljamka Groenendael , Reer Biljim Belgian iyo kan ugu caansan Belgian Laekenois , oo dhammaantood wadaaga aasaas guud. Wadamada badankood iyo naadiyada taranka dhammaan afarta eeyo waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin nooc isku mid ah oo leh noocyo kala duwan oo noocyada jaakad ah. Dhammaan afarta ey waxay wadaagaan halbeeg nooc ah dhammaan waddamada marka laga reebo AKC, oo tan iyo 1959 u aqoonsan yahay inay yihiin noocyo gaar ah oo aan aqoonsanayn mid ka mid ah afarta (kan Laekenois ), halka UKC, oo sidoo kale ah diiwaangelinta Mareykanka ay u aqoonsan tahay afarta noocba inay yihiin hal nooc. Noocyo badan oo caqli badan, dhammaan afarta nooc ee adhiga Beljamka waxay ku fiican yihiin hibooyin kala duwan, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn, shaqada booliiska sida mukhaadaraadka iyo ogaanshaha bamka, ilaalinta iyo Schutzhund, raadinta iyo samatabbixinta, sidoo kale addeecidda, deg-degga, raad-raaca, raritaanka , Kabaro iyo gaari jiidis iyo hage indhoolayaasha iyo kaaliyaha naafada. Awooddan sare, eeyaha aadka u caqliga badan waxay u baahan yihiin hoggaan, si loola dagaallamo, oo maalin kasta si fiican loo jimicsado sidaa darteedna aysan u ahayn qof walba, laakiin waxay la yeelan karaan saaxiib wanaagsan oo qoys leh milkiilayaasha saxda ah. Malium Belgian wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee afarta ido ah ee aasaasa nooc. Ilaa afarta kale qaab ahaan loo aasaasay waxaa loogu yeeri jiray 'Berger Belge a poil court autre que Malinois,' oo macnaheedu yahay 'Sheepdog-ga Beljim oo gaaban oo aan ahayn Malinois.' Maanta dhammaan afarta adhi waa kuwo caan ku ah Belgium, iyadoo Laekenois iyo Malinois inta badan loo isticmaalo eyda nooca shaqeeya marka loo eego kuwa reer Beljam Groenendael iyo Tervuren laakiin dhammaan noocyada wali waxay sameynayaan shaqaale heer sare ah.
ABTC = Naadiga Reer Beljamka ee Tervuren
Falaar Beljamka Tervuren
'Kani waa Chloe, Beljimkeena Tervuren Shepherd, jiilaalkii tagay. Sidaad u sheegi karto, waxay jeceshahay barafka. Sida Terv-ka caadiga ah, Chloe waxay yareyn kartaa dadka shisheeyaha ah marka hore (iyada oo ka dhigeysa eey waardiye fiican u ah guriga), laakiin ugu dambeyn wey kululaataa waxayna weydiisataa laablaab.
soohdinta collie weyn pyrenees qas
Chloe Belgian Tervuren oo ku raaxeysanaya barafka
Rabshadaha reer Beljim Tervuren rabshado markay jiraan 5 toddobaad jir — Can Ch. Rabshadaha Xagaaga ee Ravenmasque CGN TT RNCL
Eeg tusaalooyin badan oo Beljimka Tervuren ah
Beljim Tervuren Sawirada 1
chihuahua oo lagu daro terston boston
pomeranian jack russell terrier iskudhaf
norfolk terrier madow iyo madow
ma 2 ey oo dumar ah ayaa is fahmi doona
madow iyo bunni puppy puppy